Tirada dadka u dhintay xanuunka Covid-19 ayaa ka gudubtay hal milyan, iyada oo gobollo badan… – Hagaag.com
Tirada dadka u dhintay xanuunka Covid-19 ayaa ka gudubtay hal milyan, iyada oo gobollo badan…
Posted on 29 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Tirada dadka adduunka ee u dhintey xanuunka ‘Covid-19’ ayaa dhaaftay hal milyan, sida ay soo tebiyeen cilmi-baarayaashu , iyada oo gobollo badan weli laga soo sheegayo in tiradu sii kordheyso oo kiisas cusub la helayo.
Ururinta iyo kaydinta ay saamaysay Jaamacadda Johns Hopkins ee ku aaddan saamaynta fayraskan waxay muujineysaa in dadka ku dhintay Mareykanka, Brazil iyo Hindiya ay kala bar ka yihiin wadarta tiradaas guud ahaan.
Khubarada ayaana ka digaya in tirada dhabta ah ay u badan tahay in ay inta diwaangashan aad uga badan tahay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa ku tilmaamay “xaalad qarracan ah” iyo “natiijo xanuun badan”.
“Haddana waa inaynaan waligeen indhaha ka qarsan guud ahaan waxa socda oo aan sii calool adaygnaa,” ayuu yidhi fariin muuqaal ah oo laga soo duubay.
“Waxay ahaayeen aabbayaal iyo hooyooyin, xaasaska iyo rag, walaalo, asxaab iyo shaqo wadaag. Waa xanuun daran waxa uu ina baday cudurkani”.
Mareykanku waa dalka tirada ugu badan ay ka dhimatay, waxaana diwaanku sheegayaa 205,000 dhimasho, halka ay ku xigto Brazil oo ay ku dhinteen 141,700 iyo Hindiya oo ay ku dhinteen 95,500.
LIISKA WADDAMADA UGU DHIMASHADA BADAN:
Fiditaankan ayaa imanaya ku dhowaad 10 bilood ka dib markii warka coronavirus ay tebintiisii u horraysay ka soo baahday Wuhan, magaalo ka tirsan Shiinaha.
Cudurkan faafa ayaa tan iyo markii uu bilaabmay ku baahay 188 dal iyadoo la xaqiijiyay in ka badan 32 milyan oo kiis. Bandawga iyo tallaabooyinka kale ee la isku dayayo in lagu joojiyo faafidda fayrasku waxay galaafteen dhaqaalihii adduunka oo galay xaalad hoobad ah.
Dhanka kale, dedaallada lagu doonayo in lagu soo saaro tallaal wax ku ool ah ayaa sii socda – in kasta oo Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ay ka digtay in tirada dhimashadu ay gaadhi karto laba milyan ka hor inta aan sida ugu macquulsan loo helin tallaalkaas.